China Fekitori Yakachipa Yakapisa China Mari uye Inoshanda Multi-Span / Imwe-Span Po / Pe Firimu Greenhouse ine Soilless Kurima Kukura Tomato / Makomichi / Trawberry / Pepper-PMD001 fekitori nevatengesi | Aixiang
Dome Rudzi Multi span Greenhouse
Fekitori Yakachipa Hot China Inodhura uye Inoshanda Multi-Span / Imwe-Span Po / Pe Firimu Greenhouse ine Soilless Kurima Kukura Tomato / Makomichi / Trawberry / Pepper-PMD001
Rudzi rwegreenhouse urwu rwakasiyana neiyo imwechete span tunnel greenhouse.
Iyo span upamhi inogona kunge iri kubva pa6m kusvika 10m kazhinji, hupamhi hudiki ndeye 6m, yakakura span upamhi isu tingaite 16m yeiyo yakawanda span epurasitiki firimu girafu .Iyo yakareba yakagadziridzwa.Yedu greenhouse tekinoroji yakafambira mberi, maitiro ese anogona kuchengetedza nguva Greenhouse inogona kudzivirira zvirimwa zvedu kuti zvidzivise mamiriro ekunze akaipisisa
Multi-span Greenhouse & Vakaona-zino Multi-span Greenhouse
Iyi mhando yegreenhouse inokodzera kudyara-nzvimbo huru uye inogona kuve nemhando dzakasiyana-siyana dzemazuva ano dzakangwara michina yekugadzirisa tembiricha yemukati uye hunyoro kuti ienderane nekukura kwenzvimbo yezvirimwa, nokudaro ichiwedzera goho rezvirimwa.
2.This mhando yegreenhouse iri isingadhuri pane girazi girinihausi uye polycarbonate girinihausi, zviri anogona acheive zvakafanana kushanda zvakasiyana zvinhu.
3.Kune zvimwe zvirimwa zvemaruva zvinoda tembiricha yakakwira yemhepo munzvimbo, iyo green-span greenhouse inonyanya kukodzera kukura uye kuwedzera goho. Muviri mukuru unotora hot-dip kwakakurudzira furemu, izvo zvinovandudza hupenyu hupenyu.
4.Yedu mushure mekutengesa sevhisi inogona kuchengeta nguva dzese, chero dambudziko raunosangana naro tinogona kuzvigadzirisa iwe nekukurumidza!
Muenzaniso Upamhi (m) Kureba (m) Kure pakati pakati pemaberere maviri (m) Hure Kureba (m) Roof Urefu (m)
AX-MF-006 6.0 / 6.5 Gadzirisa 1.0-3.0 2.5-5.5 4.0-9.0
AX-MF-007 7.0 / 7.5 Gadzirisa 1.0-3.0 2.5-5.5 4.0-9.0
AX-MF-008 8.0 / 8.5 Gadzirisa 1.0-3.0 2.5-5.5 4.0-9.0
AX-MF-009 9.0 / 9.5 / 9.6 Gadzirisa 1.0-3.0 2.5-5.5 4.0-9.0
AX-MF-010 10.0 / 10.5 Gadzirisa 1.0-3.0 2.5-5.5 4.0-9.0
AX-MF-011 11.0 / 11.5 Gadzirisa 1.0-3.0 2.5-5.5 4.0-9.0
AX-MF-012 12 Gadzirisa 1.0-3.0 2.5-5.5 4.0-9.0
Saw-zino Multi-span Greenhouse
AX-MS-F-006 6.0 / 6.5 Gadzirisa 1.0-3.0 2.5-5.5 4.6-8.3
AX-MS-F-007 7.0 / 7.5 Gadzirisa 1.0-3.0 2.5-5.5 4.6-8.3
AX-MS-F-008 8.0 / 8.5 Gadzirisa 1.0-3.0 2.5-5.5 4.6-8.3
AX-MS-F-009 9.0 / 9.5 / 9.6 Gadzirisa 1.0-3.0 2.5-5.5 4.6-8.3
AX-MS-F-010 10.0 / 10.5 Gadzirisa 1.0-3.0 2.5-5.5 4.6-8.3
AX-MS-F-011 11.0 / 11.5 Gadzirisa 1.0-3.0 2.5-5.5 4.6-8.3
AX-MS-F-012 12 Gadzirisa 1.0-3.0 2.5-5.5 4.6-8.3
Pipe (Round mutopota / Oval pombi) Mutoro Wemhepo Mutoro weChando Zvirimwa zvakarembera mutoro Kunaya Kufukidza firimu
25 / 32/42/48 / 60mm 0.75KM / H 50KG / m ^ 2 50KG / m ^ 2 50KG / m ^ 2 80-200micro
Multi-span Greenhouse Matipi
Musiyano uripo pakati pe "Multi-span Greenhouse" uye "Saw-dzino Multi-span Greenhouse"？
A inguva yakakwidziridzwa yaB. Inogona kuonekwa kubva pakuonekwa kuti kumusoro kweA kwakasiyana neyakajairika girafu. Iyo yakagadzirirwa kuti zvirinani kuona zvakasikwa kufefetedza uye kutonhora.
Iyo yakawanda-yakatambanudzwa greenhouse iyo inoreva kuti inoreva kune yakakura-nharaunda girobhutsi uko yakawanda imwechete-span girinhi dzakabatana pamwechete pamwe negero.
Chii chiri kushanda?
Mhando iyi ye green-span greenhouse inogona kushandiswa pakushanya uye kuratidzira, pamwe nekudyara kwekurima. Inowanzo shandiswa kudyara miriwo yakaita semadomasi uye magaka, uye zvakare kudyara maruva, zvirinani kushandisa nemagetsi ekuzadza mwenje.
Chimiro Chemamiriro Zvinhu
Yakakwira mhando inopisa-dip kwakakurudzira simbi mamiriro, Zinc-yekumhanyisa 275 g / m2, hupenyu hwehupenyu pamusoro pemakore makumi maviri.
Zvese zvinhu zvesimbi zvakaunganidzwa mumunda, hapana chechipiri kugadzirisa kunodiwa.
Iko kwakabatana kwakabatana uye zvekusunga hazvina kushatiswa kwemakore makumi maviri.
PO / Pe firimu rakafukidza Hunhu: Anti-dova uye isina guruva, Anti-kudonhedza, anti-mhute, anti-kukwegura
Ukobvu: 80/100/120/130/140/150 / 200micro
Kupenya kwechiedza:> 89% Kusiyanisa: 53%
Tembiricha renji: -40C kusvika 60C
Kutonhora Sisitimu: Kutonhora Pad
Iko kutonhora kwe greenhouse kunowanikwa nenongedzo yemvura uye kutonhora kwemvura. Iyo yakasarudzika yakagadzirwa kutonhora pad inogona kuve nechokwadi chekuti mvura zvakaenzana inonyorova iyo yese inotonhorera pad madziro. Kana mweya uchipinda mukati mekupora pad svikiro, unochinjana kupisa nemhute yemvura pamusoro penzvimbo inotonhorera kuti uwane humidification uye kutonhora kwemhepo.
Kutonhora sisitimu: Bvisa Fani
Simba: 1100 w
Magetsi: 380V, 50Hz, PH1
Vhoriyamu yemhepo: 44000 m3 / h
Ruzha makumi matanhatu emadhivhuru
Hot-Dip kwakakurudzira simbi furemu, Stainless simbi feni reza
Iyo yekufefetwa system inowanzoshandiswa kuchinjisa gasi mukati nekunze kwegreenhouse. Kuti uwane chinangwa chekugadzirisa tembiricha, humidity uye CO2 kusangana mukati meye greenhouse.
Kurutivi rwekufefetera kana wepamusoro mhepo yekufema system inogona kusarudzwa zvinoenderana neyako yekudyara zvinodiwa.
Imwe ndeyemanheru kufefetedza system uye imwe yacho yemagetsi kufefetedza system.
Yemukati Shading System
Anti-bvungapfunga uye Anti-donhwe
Energy-yekuchengetedza uye kuputira
Iwo maketeni akapatsanurwa kuita maviri marudzi, mweya uye insulated. Mhando dzakasiyana uye shading chiyero chemaketeni anoshandiswa sekudikanwa. Kuti uwedzere kuputira mhedzisiro mu greenhouse, kaviri mukati memumvuri mambure inogona kushandiswa.
Basa guru rehurongwa ndere kutonhorera uye mumvuri muzhizha, kuitira kuti chiedza chezuva chipararire mugreenhouse kuona kuti goho rakachengetedzwa kubva kumeso ezuva. Anti-UV, anti-chimvuramabwe, ichideredza kukuvara kumusoro kwe greenhouse.
Pashure: Yakaderera Mutengo Yakakura Yekutengesa PO Firimu Uye Girazi Chakavhara Gothic Type Yekurima Multi-span Greenhouse Ine Rolling Tafura-PMG002
Zvadaro: Hunhu Kuongorora kweChina Yakaona Zino Roof Kuvhura Kufefetedza Multi-Span Greenhouse-PMS001
Kutonhora Pad / Fan Multi Span Greenhouse ine Circ ...
Multi-Span Dome Rudzi rweGreen-chena Firimu Shading A ...
Commercial Multi-span Greenhouse nokuti Agricultur ...
Yakanyatsogadzirirwa China Multi Span Commerce / Agric ...
Kireshi Greenhouse Commercial Multi-Span Glass ...
Multi Span Steel Structure Greenhouse nokuti Veget ...